Fomba fiasa eny Alarobia: ametrahan’ny maro ahiahy ny fikirakiran’ny Ceni ny vokatra | NewsMada
Fomba fiasa eny Alarobia: ametrahan’ny maro ahiahy ny fikirakiran’ny Ceni ny vokatra
Manomboka tsy mazava amin’ny maro ny fomba famoahan’ny Ceni ny voka-pifidianana tato anatin’ny andro vitsy. Efa nametrahan’ny sasany ahiahy ny tsy nivoahan’izany ny alin’ny 7 novambra lasa teo raha tsy efa tany amin’ny iray ora maraina. Taty aoriana, karazan’ny mamofompofona paikady hafahafa sy manjavozavo ary tsy azon’ny olon-tsotra na ny maro, eny hatramin’ny kandidà, ny fivoahan’ny voka-pifidianana. Manomboka midina tsikelikely ny tahan’ny vato azon’ireo kandidà roa voalohany ary misoko mangina miakatra moramora ireo kandidà maromaro aty aoriana.
Kandidà tsy nihetsika tao an-tranony…
Anisan’ny mahagaga ao anatin’izany koa ny kandidà tsy nanao fampielezan-kevitra fa nijanona tao an-tranony nijery fahitalvitra na koa nihaino radio. Mety tsy nivoaka an’Antananarivo mihitsy mba nanao fampielezan-kevitra nefa mandresy ireo kandidà tombanana fa manana ny maha izy azy izy ireny, any amin’ny faritra sasany. Anisan’ny resiny, ohatra, ireo praiminisitra telo na koa ireo efa minisitra sy nitantana teo aloha.
Tsy mandeha amin’ny lojika ny voka-pifidianana
Iza izany ny ao ambadik’izao raharaha ahina mety hampisafotofoto ny mpifidy sy ny vahoaka izao ? Inona avokoa ny antony mahatonga izany rehetra izany ? Ahina mety misy lava tanana na koa tsy fahaiza-manao na koa hadisoana tafahoatra na mety fanahy iniana any ho any izany? Hita taratra fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy na ny lojika ny fizotry ny fivoahan’ny voka-pifidianana sasany any amin’ny faritra samihafa any.
Araka izany, tokony hoijerena akaiky sy haingana ato anatin’ny fotoana fohy ny tranga tahaka izao mba tsy hiitatra ny ahiahin’ny maro, manoloana ity voka-pifidianana ity satria iankinan’ny ain-dehiben’ny firenena izany.